रोल्पामा सहज छैन गठबन्धन « Online Sajha
कोरोना भाइरस सरकार नेकपा (माओवादी केन्द्र) राेल्पा प्रधानमन्त्री नेकपा (एमाले) प्रचण्ड नेपाली काँग्रेस
रोल्पामा सहज छैन गठबन्धन
२२चैत्र, रोल्पा । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने बिषयमा केन्द्रमा सत्तारुढ गठबन्धन बीच सहमती भएको छ । नेपाली काँग्रेसले आबश्यकताका आधारमा तालमेल गर्न सकिने निर्णय गरेसँगै सत्तारुढ दलबीच जिल्ला हुदै स्थानीय तहसम्म तालमेलका लागि छलफल सुरु भएको छ ।
रोल्पामा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजबादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेलका लागि प्रारम्भिक बैठक बसी तयारी थालेका छन् । जिल्लाका रोल्पा नगरपालिका, माडी गाउँपालिका र लुंग्री गाउँपालिकामा पनि गठबन्धन दलको बैठक बसी तालमेलको छलफल अघि बढेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले तालमेल बारे छलफल गरेको जानकारी नआए पनि यो क्रमले निरन्तरता पाउने र जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा यसबारे छलफल हुने देखिएको छ । रोल्पामा चुनावी तालमेलका लागि गरिएको यो सुरुआती प्रयास मात्रै हो । उनीहरु अन्तिम निश्कर्षमा पुग्न धेरै पापड पेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
रोल्पामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच चुनावी तालमेल सोचे जति सहज भने छैन । प्राकृति दुस्मन झै देखिएका यी दलहरुको अहिलेसम्मको अबस्था हेर्दा सहजै गठबन्धन हुने अबस्था कमजोर देखिन्छ । जिल्लाकै मुख्य प्रतिस्पर्धी दुई दल बीच गठबन्धन गरेर तेश्रो दलसँग निर्वाचन लड्ने लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरुप नहुने कतिपयको बुझाई छ ।
काँग्रेसले दुईचार ठाउँ जित्नु वा हार्नु ठूलो कुरा नभई लोकतन्त्रकै हारजीतको कुरा भएको काँग्रेसजनको बुुझाई छ । संसदीय परम्परा र लोकतन्त्रमा दुई ठूला दल मिलेर तेश्रो दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु हास्यास्पद मात्रै हैन संसदीय मर्यादा बिपरित पनि हो, काँग्रेस नेता लेखनाथ आचार्यको बुझाई छ । संसदीय परम्परा र लोकतन्त्र बचाउने भनेकै काँग्रेस भएकाले निर्वाचन हारजितका नाममा गरिने गैर लोकतान्त्रिक चरित्रको पछि काँग्रेस लाग्नु नहुने उनको बुझाई छ । यस्तो धारणा राख्ने काँग्रेस कार्यकर्ताको रोल्पामा ठूलो पंक्ति छ ।
एक नगरपालिका सहित १० स्थानीय तह रहेको रोल्पामा २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले ७ स्थानीय तह जितेको थियो । उसले रोल्पा नगरपालिका, सुनिलस्मृती गाउँपालिका, सुनछहरी गाउँपालिका, थबाङ गाउँपालिका, परिवर्तन गाउँपालिका, गंगादेब गाउँपालिका र माडी गाउँपालिका जितेको थियो । नेकपा एमालेले त्रिवेणी गाउँपालिका र रुन्टीगढी गाउँपालिका तथा नेपाली काँग्रेसले लुंग्री गाउँपालिका जितेको थियो ।
केन्द्रमा नेकपा माओवादीसँग सत्ता साझेदारी गरे पनि २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन रोल्पाका कतिपय स्थानीय तहमा काँग्रेस–एमाले र काँग्रेस स्वतन्त्र बीच तालमेल भएको थियो । जिल्लाको माडी गाउँपालिकामा काँग्रेस–एमाले र थबाङ गाउँपालिकामा काँग्रेस–स्वतन्त्र बीच चुनावी तालमेल भएको थियो ।
माडी गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसका गोपाल घर्तीमगर गाउँपालिका अध्यक्ष र नेकपा एमालेका प्रेमबहादुर घर्तीमगरले उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । अध्यक्षमा गोपाल घर्तीमगरको २ हजार ६२८ मत आएको थियो । उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका उमेदवार नन्दबहादुर पुनले ३ हजार १८२ मत ल्याइ हराएका थिए । उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उमेदवारले प्रेमबहादुर घर्तीमगरले २ हजार ६८९ मत प्राप्त गरेका थिए । उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रकी उमेदवार धनिकला घर्तीमगरले ३ हजार २५१ मत ल्याई पराजित गरेकी थिईन ।
यसैगरि थबाङ गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदमा स्वतन्त्र उमेदवार अमित घर्तीमगरले १ हजार ५७ मत प्राप्त गरेका थिए । सो गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उमेदवार वीरबहादुर घर्तीमगरले १ हजार ९६० मत प्राप्त गरि विजयी भएका थिए । उपाध्यक्ष नेपाली काँग्रेसकी उमेदवार श्रीकुमारी रोकाले ९६५ मत गरेकी थिईन । सो गाउँपालिकामा नेकपा माओवादीका उमेदवार रामकिरणी रोकामगरले १ हजार ९६५ मत प्राप्त गरि विजयी भएकी थिईन ।
पछिल्लो समयमा आएर मात्रै गठबन्धन गरिएकाले उक्त गठबन्धनले निर्वाचन जित्न नसकेको नेपाली काँग्रेस प्रदेश (ख) सभापति गोपाल घर्तीमगरको भनाई छ । समयमै गठबन्धन गरेर अघि बढेको भए परिणाम फरक आउन सक्थ्यो घर्तीमगरले भने ।
एउटै दल मजबुत रहेको स्थानीय तहः
जिल्लाको परिवर्तन गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र मजबुत देखिएको छ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा रोल्पाको क्लीन स्वीप गर्ने रोल्पाको एक मात्र गाउँपालिका रहेको सो गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका उमेदवार निमकान्त डाँगीले आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेपाली काँग्रेसका झक्कु घर्तीमगरलाई दोव्बर बढी मतान्तरले हराएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका डाँगीले ४ हजार ६०४ मत ल्याउदा काँग्रेसका घर्तीमगरले १ हजार ९८९ मत प्राप्त गरेका थिए । यो परिणाम २ हजार ६१९ को मतान्तर हो । तेश्रो स्थान हासिल गर्ने नेकपा एमालेका उमेदवार लोकेन्द्रबहादुर घर्तीमगरले ६५९ मत प्राप्त गरेका थिए । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको मत जोड्दा समेत माओवादी केन्द्र एक्लैको १ हजार ९५६ मत बढी हुन्छ ।
जिल्लाको माडी गाउँपालिका , थबाङ गाउँपालिका, रोल्पा नगरपालिका र सुनछहरी गाउँपालिका नेकपा माओवादी मजबुत रहेका स्थानीय तह हुन । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा माडी गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन हँदा समेत नेकपा माओवादी केन्द्रका उमेदवार विजयी भएका थिए । सो स्थानीय तहमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनले २ हजार ६२८ मत लिदा नेकपा माओवादीले एक्लै ३ हजार १८२ मत प्राप्त गरेको थियो । यो ५५४ को मतान्त हो ।
थबाङ गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेस र स्वतन्त्र उमेदवार बीच तालमेल हुँदा समेत नेकपा माओवादी केन्द्र विजयी भएको थियो । थबाङमा काँग्रेस स्वतन्त्र उमेदवारले १ हजार ५७ मत प्राप्त गर्दा माओवादी केन्द्रका उमेदवारले १ हजार ९६० मत प्राप्त गरेका थिए । सो गाउँपालिकामा काँग्रेस स्वतन्त्र गठबन्धनका विरुद्ध नेकपा माओवादी एक्लै ९०३ मतान्तर सहित विजयी भएको थियो । सो गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका उमेदवारले १२० मत प्राप्त गरेका थिए ।
जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका उमेदवारले ५ हजार ३६४ मत प्राप्त गरि विजयी भएको थियो । नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसले ३ हजार ८२७ र नेकपा एमालेले ४७८ मत प्राप्त गरेका थिए । रोल्पा नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको मत जोड्दा पनि माओवादी केन्द्र १ हजार ५९ मतान्तरले विजयी भएको थियो ।
सुनछहरी गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका उमेदवारले २ हजार ५६१ मत प्राप्त गरि विजयी भएका थिए । सो गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसका उमेदवारले १ हजार १३६ र नेकपा एमालेका उमेदवारले ९४७ मत प्राप्त गरेका थिए । सो गाउँपालिकाम नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको कुल मत भन्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका उमेदवारको एकल मत ४७८ मत बढी थियो ।
दुई दलको तालमेलले परिणाम प्रभावित गर्न सक्ने स्थानीय तह
जिल्लाका लुंग्री, सुनिलस्मृती र त्रिवेणी गाउँपालिकामा कुनै दुई शक्तिको गठबन्धन भए परिणाम मा फेरबदल आउन सक्ने स्थानीय तह हुन । लुंग्री गाउँपालिका २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको एकमात्र स्थानीय तह हो । उक्त निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले ३ हजार १२५ मत प्राप्त गरि विजयी भएको थियो । दोश्रो स्थान हासिल गरको नेकपा माओवादी केन्द्रले २ हजार ९१०, राप्रपाको मत १०११ र नेकपा एमालेको मत ७०९ रहेको थियो । सो गाउँपालिका कुनै दुई शक्ति बीच गठबन्धन भए मतपरिणाम समेत फरक आउने देखिन्छ ।
जिल्लाको सुनिलस्मृती गाउँपालिकामा २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उमेदवार विजयी भएका थिए । सो निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उमेदवारले ४ हजार १५५ मत प्राप्त गरेका थिए । निकटम प्रतिद्धन्दी नेपाली काँगेसका उमेदवारको पक्षमा ३ हजार ६० मत र नेकपा एमालेका उमेदवार उमेदवारले १ हजार १९ मत प्राप्त गरेका थिए । सो गाउँपालिकामा राप्रपाको ३१२ र राजमोको ३०१ मत रहेको थियो । सो गाउँपालिकामा कुनै दुई वा सो भन्दा बढी दलको गठबन्धन भए निर्वाचन परिणाम फरक आउने देखिन्छ ।
नेकपा एमालेले जितेका रोल्पाका दुई स्थानीय तह मध्ये त्रिवेणी गाउँपालिका एक हो । सो गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका उमेदवारले ३ हजार ३३३ मत प्राप्त गरेका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्धन्दी नेकपा माओवादी केन्द्रका उमेदवारले ३ हजार ११२ र नेपाली काँग्रेसका उमेदवारले ९८४ मत प्राप्त गरेका थिए । सो गाउँपालिकामा नेकपा मालेका उमेदवारको ७५८ मत आएको थियो । सो गाउँपालिकामा कुनै दुई दलले गठबन्धन गरे निर्वाचन परिणाम फरक आउने देखिएको छ ।
त्रिपक्षिय भिडन्त हुने स्थानीय तह
जिल्लाको रुन्टीगढी गाउँपालिका र गंगादेव गाउँपालिकामा त्रिपक्षिय भिडन्त हुने देखिएको छ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा रुन्टीगढी गाउँपालिकामा नेकपा एमालेबाट बालाराम बुढामगरले ३ हजार ४०३ मत प्राप्त गरि विजयी भएका थिए । निकटतम प्रतिद्धन्दी नेपाली काँग्रेसका उमेदवार टेकबहादुर बस्नेतले ३ हजार २७८ मत प्राप्त गरेका थिए । तेश्रो स्थान हासिल गरेको नेकपा माओवादीका उमेदवार गोबिन्द पुनले ३ हजार १०८ मत प्राप्त गरेका थिए ।
९वटा वडा रहेको सो गाउँपालिका २ वडाध्यक्ष ने.क.पा.एमाले ४ वडाध्यक्ष नेपाली काँग्रेसले र ३ वडाध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेका थिए । गाउँपालिकामा १४ हजार ९४८ मतदाता रहेको थिए ।
यसैगरी तत्कालिन सुकीदह (परिवर्तित गंगादेव) गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका उमेदवार वीरबहादुर खत्रीले २ हजार ४१४ मत प्राप्त गरि विजयी भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्धन्दी नेकपा एमालेका उमेदवार रोशनकुमार वलीले २ हजार २९० मत प्राप्त गरेका थिए । तेश्रो स्थान हासिल गरेका नेपाली काँग्रेसका उमेदवार हरिवहादुर पुनले २ हजार २६१ मत प्राप्त गरेका थिए । १० हजार ७२२ मतदाता रहेको सो गाउँपालिकामा ४ वटा वडाध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र जितेको थियो भने २ वटा वडा नेकपा एमाले र १ वटा वडा नेपाली काँग्रेसले जितेको थियो ।
नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको पछिल्लो तित्तताले पनि काँग्रेस एमाले बीच गठबन्धन हुने कुरा नकार्न सकिदैन । केही दिन अघि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रमुख अतिथि रहेको रोल्पा लिबाङमा आयोजित जनसभामा सार्वजनिक रुपमै नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवम् लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्र पुनले नेपाली काँग्रेस रोल्पाका उपसभापित हरिबहादु पुनलाई गम्भिर आरोप लगाए । नेता पुनको आरोपको खण्डन गर्दै उपसभापति पुनले विज्ञप्ती मार्फत खण्डन मात्र गरेनन् आरोप पुष्टी गर्न चूनौती समेत दिए ।
माओवादी नेता पुनले काँग्रेस उपसभापति पुनलाई १७ लाख बराबरको अनियमिता गरेको तथा गंगादेव गाउँपालिकामा भएको बाईकमा आगजनीको विषयमा सार्वजनिक रुपमा आरोप लगाएका थिए । यसका साथै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर माडीचौरमा रहेको प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन क्याम्पसमा माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले नेपाली काँग्रेस निकट नेविसंघका विद्यार्थी माथि गरेको कुटपिटको विषयले पनि दुई पार्टी बीच दुरी बढाएको थियो ।
नेकपा माओवादी नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी भने विगत बिर्सनु पर्ने बताउछन । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ रोल्पाद्धारा आयोजित महोत्सव उद्घाटन गर्न रोल्पा आएका मुख्यमन्त्री केसीले गठबन्धनका साथिहरुलाई जनताको भावना बिरुद्ध नबहकिन आग्रह गरे । मन्तव्यको अधिकांश समय नेकपा एमालेलाई गाली गर्न खर्चिएका मुख्यमन्त्री केसीले लोकतन्त्र, गणतन्त्रको रक्षा र संघीयता कार्यान्वयनका लागि गठबन्धन भएको बताए । कुनै बेला हामी पक्ष प्रतिपक्षमा थियौ समय र परिस्थितिले हामी एउटै उद्धेश्यमा आईपुगेका छाँै केसीले भने । वडासम्मै गठबन्धन गरेर नयाँ ईतिहास कायम गर्ने उनको दाबी थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ४१ सिट रहेको नेकपा एमालेलाई ३६ सीटमा खुम्च्याएर सत्ताबाट आफैले बहिरगमन गरेको मुख्यमन्त्री केसीको दाबि छ । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई भाङ बालेर खोज्नु पर्ने अवस्थामा पु¥याउने बताउँदै ५ वर्षका लागि “बयटिङ” पार्टीको रुपमा रहन आग्रह गरे ।
नेपाली काँग्रेस भने रोल्पामा माओवादी केन्द्रसँग सहजै गठबन्धन हुने अवस्था नभएको बताउछ । रोल्पामा नेकपा माओवादी केन्द्रको अत्यधिक दम्भले गठबन्धन सहजै हुने अवस्था देखिदैन नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले भने । असहमतिका बीच पनि सत्तारुढ दलबीच गठबन्धन गरेर जाने निर्णय भएकाले आधिकारिक रुपमा गठबन्धन विरुद्ध जाने अवस्था छैन सभापति पुनले भने ।
गठबन्धनका लागि माओवादी दम्भ बाधक छ । नेपाली काँग्रेस रोल्पाका निवर्तमान सभापति समेत रहेका पुनले भने । नेपाली काँग्रेस पनि एउटा शक्ति हो भनेर सम्मानजनक सहभागिता भएमात्रै गठबन्धन हुन्छ पुनले भने । पार्टीको निर्णय अनुसार सत्तारुढ दल बाहिर गठबन्धनको सम्भावना कम भएपनि नेकपा एमालेका उमेदवारले आफुले नजित्ने स्थानीय तहमा नेपाली काँग्रेसका उमेदवारलाई भोट हाले स्वागत गर्छौ सभापति पुनले भने ।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वताका तत्कालिन माओवादीले रोल्पामा नेपाली काँग्रेसका १२१ जना सक्रिय कार्यकर्ताको हत्या गरेको काँग्रेस रोल्पाको आरोप छ । केही वर्ष अघि पनि उनीहरुले नेपाल तरुण दल रोल्पा नगरपालिका अध्यक्षको हत्या गरे नेपाली काँग्रेस रोल्पाका एक नेताले भने । शान्ति प्रकृया पछि पनि काँग्रेस कार्यकर्ता हत्या गर्ने क्रम रोकिएको छैन ती नेताले भने ।
प्रकाशित मिति : २०७८ चैत्र २२ गते मङ्गलवार
अनलाइन साझा भिडियो
रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्षमा एमाले र उपाध्यक्षमा कांग्रेस विजयी
रोल्पाको सुनछहरीमा तीन दलिय गठबन्धन पराजित, माओवादी केन्द्र विजयी
रोल्पाको लुंग्री गाउँपालिकामा कांग्रेस पराजित, माओवादी केन्द्र विजयी
रोल्पाको रुन्टीगढीमा कांग्रेसका पुन र केसी विजयी
सुनिलस्मृति गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी
रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकामा माओवादी विजयी
विद्यार्थीका हातमा कहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक पुग्छ ?
नून बोक्ने एम्बुलेन्सले बिरामी बोक्न मानेन, ड्राइभर भन्छन्, ‘हाकिमले जान दिएनन्’
काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए ६५३ कोरोना संक्रमित
सूचना तथा प्रसारण विभागा दर्ता नं. : ३२१०-२०७८/७९